Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Udo Site Njem Nleta Ugbu a - Ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị
Na-agbasa News Travel • omenala • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Udo Site na njem
dere Max Haberstroh
Udo karịrị enweghị agha - ọ dịghị udo, ọ dịghị Tourism. Ọ bụ eziokwu na oge agha nwere ndị dike a ma ama, ebe udo nwere 'ndị dike ya na-agbachi nkịtị.' N'oge COVID ọ bụ ndị nọọsụ, ndị dọkịta, ndị nọ n'ihu na ndị ọrụ. Ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ SME, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na onye nwe ụlọ mmanya, yana ndị ọrụ na-enye ọgwụgwọ na ahụike yana ihe mkpuchi na ịpụpụ - na ịmara na mkpọchi ọzọ ga-akụda azụmahịa.
Mgbe idei mmiri ahụ bịara, na-ebibi ubi, ụlọ, akụrụngwa ọha na eze, na ihe ndị mmadụ ji ebi ndụ, ndị ọrụ afọ ofufo sitere n'ebe dị anya na nso nso na-agba ọsọ iji nyere aka maka ọrụ ebere.
Ndị mmadụ ji obi ha niile nye onyinye.
N'ebe ọkụ na-agba ọkụ na-emebi, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ nwere obi ike, na-enwekarị olileanya na ha dị ala karịa ike ọkụ ọkụ, na-alụ ọgụ siri ike ehihie na abalị, ruo mgbe ike gwụrụ ha.
Na mberede, mpako, hedonism na nkasi obi zoning, ma ọ bụghị deplored dị ka ihe ịrịba ama nke omume ọjọọ, chere dị ka chụpụrụ, na-enye ụzọ ihe ọ bụla ọzọ ma ọchịchọ ịhụ onye agbata obi gị n'anya. Cataclysms na-emepụta iwu nke ha. Oge udo enwetala ndị dike ya, na n'oge ihe egwu na ọdachi ndị mmadụ nwere ike igosi akụkụ nke ọzọ - ọ nwere ike ịbụ ihe kacha mma.
Ọrụ ahụ siri ike, ihe ndọghachi azụ dị adị, nchekwube dị mkpa, n'agbanyeghị. Ihe mberede mberede na-adịkarị mfe ibute ụzọ - yana ngwa ngwa - enyemaka, ebe mmepe nke ji nke nta nke nta na-egbu egbu na-efunahụ ndị mmadụ nke ọma ka ha kpalite ngwa ngwa. Akụrụngwa, enwetara site na nzọụkwụ, ga-ewe oge ha ịmị mkpụrụ, ebe ohere onye ọ bụla maka ndị mmeri 'na-enwu' na-echere.
N'ozuzu, dike n'oge udo na obere ihe mberede nwere ike ịbụ ihe na-adọrọ adọrọ, ma ọ bụghị ihe bara uru ("ihe ịrụ ụka adịghị ya na pacifism dike bụ ihe a pụrụ ichetụ n'echiche," ka ọ na-ekwu. Albert Einstein). Udo abụghị onye na-eme ihe nkiri; udo bụ ihe si n'omume anyị pụta. Ọ baghị uru ikwu na nke a na-enye ezigbo ihe ịma aka nye ndị isi njem na njem nlegharị anya dị ka ndị ọkachamara nkwukọrịta ime ihe!
Dị ka ndị njem, anyị na-akwụ ụgwọ maka ezumike anyị. Nke ahụ pụtara na anyị na-enwe mmasị ịnụ ụtọ ezumike anyị karịa ego anyị kwụrụ maka nke ahụ. Anyị kwesịrị ịma banyere ihe ùgwù nke ịbụ ọbịa nke ndị ọbịa anyị. Àgwà ọha mmadụ bụ isi ihe na-eme ka a na-ebikọ ọnụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị - dị ka ndị ọbịa - na-eche na ile ọbịa anyị na-enye ndị ọbịa anyị na-eyi egwu na ọ ga-ejedebe dị ka ụdị mmegide nke ndị bịara abịa, mgbe ahụ, a na-emebi ntụkwasị obi onwe onye nke ọha na eze nke ukwuu. Ịmepụta mmebi na enweghị nkwekọrịta bụ ụzọ ọzọ isi ebute mmetọ gburugburu ebe obibi.
Anyị 'anya' maka gburugburu ebe obibi na mmetụta ọmịiko kwesịrị ịdị nkọ, iji mara ihe dị mma ma anụ ahụ (mpụta) na psychic (ime) 'gburugburu.' Ọ bụ naanị udo dị, ma ọ bụrụ na anyị gbanyere mkpọrọgwụ n'ime onwe anyị dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu, bụ́ ndị na-ekerịta echiche nke nsọpụrụ n'etiti onwe anyị. Njem na njem nlegharị anya na-enye ọkwa zuru ụwa ọnụ maka omume ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Otu onye kwuru na ọ dị ka anya na-apụghị ịhụ onwe ya. Ọ nwere ike mụta ime ka echiche ya dị na gburugburu ya, dị ka nkà na-agbanwe agbanwe nke onye na-ese foto.
N'ileghachi anya na nlebanya nke njem nlegharị anya nke na-akwalite nghọta mba ụwa, anyị nwere ike ịchọpụta: N'oge kachasị njọ ọ bụ adịgboroja (dịka njem na-agụnye njem!), Ọ kachasị mma ọ bụ echiche efu. Ọ na-azụ akụkọ ifo ndị na-eme ihe na-ekerịta na ajọ mbunobi ga-apụ n'anya, na-akpalite olileanya dị jụụ nke anyị onwe anyị, ndị njem, na-ekekọrịta, na nke a agaghị eme kpọmkwem, na anyị nwere ike ịkwado n'echiche anyị edoziziri. Kama ndị obodo, anyị na-ezute ndị obodo. Mmetụta e bu n'obi gbagote maka nghọta mba ụwa pere mpe: N'agbanyeghị isonye na nlegharị anya nlegharị anya, na-anụ ụtọ nka nri nri onye ọbịa ma ọ bụ na-eme nchọgharị na ụlọ ahịa mara mma, ọtụtụ kọntaktị ezumike na-adịkarịghị adị na nke nkịtị. Ha na-apụ n'anya ka oge na-aga, dị ka echiche ndị njem na-eme mgbe ụfọdụ.
Ọdịiche dị n'elu ' Tourism Unlimited' apụtala n'ihi na akara ngosi mmekọrịta ọha na-adị na mbụ apụtalarị ma ọ bụ kpochapụ kpamkpam. A na-enye ebe ezumike n'otu oge echere na ọpụrụiche ugbu a na katalọgụ ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla.
Ebe ụfọdụ agabigala mgbanwe dị ịrịba ama, dịka ọmụmaatụ Baden-Baden: A na-akpọbu ya dị ka 'isi obodo okpomọkụ nke Europe,' ebe ndị ọgaranya na ndị mara mma na-eme ihe ngosi nke onwe ha 'Vanity Fair,' obodo spa-obodo taa bụ ebe dị mma na ebe dị mma. ịdị mma ọbụna maka ndị ahịa na ọdịmma. – Ma ọ bụ họrọ Madeira, ebe a ma ama sanatoriums na a nwayọọ ihu igwe na ụwa nke elu-klas ozugbo enwetara: Taa agwaetiti-steeti bụ njem ụgbọ mmiri na ngwugwu-njem njem.
Nke ka mkpa ka bụ ihe gbasara Venice: N'ịbụ onye a ma ama dị ka ihe nketa ụwa nke UN, Venice abanyela na nso nso a site n'aka ndị njem nlegharị anya obere oge sitere na nnukwu ụgbọ mmiri na-eyi egwu n'ụzọ dị mkpa n'ime ọdọ mmiri na ịdị jụụ nke ndị obodo. Ndị obodo ewerela ụdị mwakpo a dịka mbuso agha - megide obodo ha na ndụ ha.
Ọnọdụ ahụ n'ebe ndị ọzọ yiri nke ahụ: Angkor, bụbu obodo ụlọ nsọ Hindu-Buddha dị ebube nke ndị eze Khmer, malitere ire ere site na narị afọ nke 15 gaa n'ihu wee daa na echefuru echefu. A kwenyere na mgbanwe ihu igwe (!) na hubris mmadụ kpatara ọdịda Angkor.
Naanị na narị afọ nke 19 ndị France na-eme nchọpụta chọpụtara mkpọmkpọ ebe wee weta Angkor n'ehihie. Mgbe Agha Vietnam gasịrị, ndị Kọmunist Khmer Rouges meriri ha. Taa, ndị Khmer Rouges agaala, “ìgwè enwe na ndị njem nlegharị anya” (Christopher Clark, ọkọ akụkọ ihe mere eme Australia) eweghachiwo nnukwu mkpọmkpọ ebe ụlọ nsọ nke Angkor Vat na Angkor Thom.
Na 'Expansion du tourisme,' Oriakụ Anita Pleumaon nke Tourism Investigation & Monitoring Team (tim-team) na-achịkọta: "Ụkpụrụ ọgbara ọhụrụ, nke etinyere na obodo Eshia na mmepe ngwa ngwa, yiri ka ọ kpataara mmetụta na-agbawa obi karịsịa na mmetụta nke ọgba aghara. nkewa, ọgba aghara na enweghị ntụkwasị obi. Usoro nke ịzụ ahịa na homogenization na oke mgbasa ozi ọhụrụ, foto na ozi hapụrụ obere ohere maka ọdịnala, nkwupụta omenala, ụkpụrụ nke ezinụlọ na obodo." Ụzọ anyị si aga ebe a na-ewu mma agha ihu abụọ ebe ọ bụ na echiche ya na usoro ya na-agbaso usoro ọdịda anyanwụ? Ọ nwere ihe jikọrọ mbọ anyị siri ike nke 'ịwu ụlọ' na echiche nke 'iwu obodo' mgbe Agha Nzuzo gachara?
Enwere ike ịhụ ihe akaebe kachasị njọ nke enweghị nkwekọrịta nke ọchịchị onye kwuo uche ya na ọdịda obodo na Afghanistan. Afghanistan, na 1960 na 70s njem na-akpali akpali njem na eluigwe maka dropouts si Europe, kwadebere nke ọma ala maka mmeri nke ike ụwa abụọ: Soviet agha na 1989 na US-edu NATO agha na August 2021. Ndị Soviet, Afghanistan bụ naanị egwuregwu ike, maka US na NATO ọ bụ ebe ama ama nke iyi ọha egwu mba ụwa na ebe nzuzo nke Osama Bin Laden, onye na-eyi ọha egwu 9/11.
Ebumnuche nke ntinye aka ndị agha US-NATO bụ ịkwatu ọchịchị Taliban mgbe ahụ wee jide Bin Laden. Emechara ọrụ abụọ a, mana ihe ịma aka dị ebube mere ka njikọ aka nke Western “nọọ obere oge,” iji mee ka Afghanistan dị ka ọchịchị onye kwuo uche ya nke ọdịda anyanwụ. Ihe mgbaru ọsọ a dara n'ụzọ ihere, ndị agha ndị agha Taliban laghachiri ma manye US na NATO ka ha hapụ Afghanistan harum scarum - na ọtụtụ ndị nwụrụ anwụ, merụrụ ahụ ma ọ bụ traumatized, ọtụtụ ijeri dollar ejiri, na nnukwu obi abụọ hapụrụ. Ha na-ejedebe n'ajụjụ ebighị ebi ma a na-azaghị: Gịnị maka?
Ihe ncheta dị egwu nke Agha Vietnam amalitela. Foto nke mgbapụ dị egwu na helikopta sitere na elu ụlọ Saigon na 1975 ka agbakọtara na 2021, na foto nke elu igwe na-ebuli elu site na ọdụ ụgbọ elu Kabul, juputara na ndị nwere nkụda mmụọ, ụfọdụ n'ime ha rapara n'ụgbọ elu ahụ wee daa…
Kedu onye ikpe mara? Ònye na-ewere ọrụ? Kedu maka nkuzi amụtara?
Ndị na-ahụ maka ọrụ bụ ndị niile na-enweghị ike ịghọta ma ọ bụ jụ ịnakwere nkuzi ndị ha kwesịrị ịmụta na mbụ: nke mbụ, usoro mmekọrịta ọha na eze na ụzọ ndụ ọha mmadụ enweghị ike ibufe ndị ọzọ site n'ike - ọ dịghị ebe ọ bụla ma ọlị na Afghanistan; nke abụọ, ọrụ ndị agha bụ ibu agha, ọ bụghị iwulite ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, na ịkwanye olulu mmiri; nke atọ, ma ndị agha na ọrụ obodo chọrọ ọhụụ siri ike na nke dabara n'oge, ma ọ bụ ebumnobi nke a ga-eme ka onye ọ bụla bụrụ ihe kpatara ya - na ọ bụghị naanị usoro ndị a zubere nke ọma na njedebe na-emeghe na ọtụtụ echiche efu dị elu; n'ihu, mmekọrịta jikọrọ ọnụ n'etiti ndị isi obodo na ndị mmekọ mba ọzọ nwere ọchịchọ siri ike na-enwekwu mmasị na nrụrụ aka. Ụdị 'njikọ ihe ize ndụ' a ga-ebute agha ma ọ bụ ọbụna agha ma kpatara ọgba aghara gba ọtọ n'ikpeazụ.
Ọtụtụ mgbe, mgbe a ọkara obi ma ogologo oge nkwa agha, mba ọzọ mmekọ' nhọrọ kasị mma yiri ka ọ na-ahapụ ọnọdụ - na ugboro ugboro ahụmahụ nke ụgbọ elu ihere, kama ịpụ n'usoro, ma ugbu a olileanya na isi ihe mụtara: idobe. pụọ n'okwu dị n'ime obodo ndị ọzọ, ọkachasị mgbe ndịiche na mmekọrịta ọha na eze siri ike ịpụ. Onye edemede Bekee-Dutch bụ Ian Buruma na-ezo aka na 'ọnyà colonial' ike dị ukwuu na-adaba na, mgbe ahụ na ugbu a.
Ọ dị oke anya itinye akwụkwọ akụkọ 'Colonial trap' maka ndị NGO enyemaka mmepe? Enyemaka mmepe mmegide a na-eche ihu n'ụzọ dị ukwuu n'àgwà nke ọtụtụ ọrụ aka ọrụ, nwere ebumnuche dị elu mana ọ bụ naanị nsonaazụ a na-ahụ anya. Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara si mba ọzọ nwere ike ime ihe bara uru ọ bụghị naanị dị ka ndị na-akwado aka na ndị na-enye ọzụzụ, kamakwa dị ka ndị ogbugbo kwesịrị ntụkwasị obi n'etiti otu mmasị obodo na-asọ mpi. Mmepe njem nlegharị anya n'ọdịdị ya dị iche iche na parampat bụ ihe ọ bụla ma ewepu ya. Ewoo, ọnwụnwa ahụ bụ n'ezie na mmadụ na-etinye aka nke ukwuu n'ihe gbasara ime obodo nke ndị ọbịa, na ọpụpụ ọkachamara nwere ike chepụta naanị na ọ bụrụla akụkụ nke nsogbu ahụ, ọ bụghị ihe ngwọta ya.
A na-enwekarị ekele maka ịkpọpụta okwu n'ụzọ doro anya ma na-enye echiche na-enweghị atụ nke ' Tourism' na 'iyi ọha egwu', ikwu okwu ọjọọ nwere ike ịnwụ: Njem nlegharị anya hụrụ nnwere onwe n'anya, iyi ọha egwu chọrọ ịkpọasị. Njem nlegharị anya, n'okwu ya kachasị njọ, nwere ike igbu omenala obodo n'ụzọ dị nro, ebe iyi ọha egwu na-egbu ozugbo, ma ezubere iche ma na-enweghị obi ebere, ma na njem nlegharị anya dịka otu n'ime ndị mbụ metụtara ya.
Njem nlegharị anya enweghị ike itolite, ebe iyi ọha egwu na-ada, njem nlegharị anya chọrọ udo. Kedu ka anyị ga-esi kwuo na njem & njem nlegharị anya na-enye aka n'ụzọ dị irè n'ịmepụta na idobe udo? Ọ dịtụla onye ọ bụla anụla maka nnukwu ọrụ nke otu ndị njem nlegharị anya, ya na ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ, n'ịgbalị idobe, sị, Afghanistan ka ọ bụrụ obodo udo na nke nwere ndidi na ebe njem nlegharị anya, ka ọ dịbu na afọ iri isii?
Ihe dị ka afọ iri abụọ ka agha ahụ gachara, Vietnam abụrụla ebe njem na-adọrọ adọrọ, ọbụlagodi na ọchịchị Kọmunist na ntọala onye isi obodo (!), yana mmekọrịta enyi na US na ụwa. Mkparịta ụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ịkparịta ụka n'ụlọ ọrụ achụmnta ego, na nleta akụkọ ihe mere eme nke President Clinton na 2000 mere ka nhazi nke gọọmentị na mpaghara azụmahịa dị ka mantra ha. Njem na njem nlegharị anya na-agbaso otu, mana usoro ndị gara aga nke nwere ike igosi ntinye aka nke UNWTO ma ọ bụ WTTC siri ike icheta.
Anyị nwere ike were Vietnam dị ka ụkpụrụ na-atụ egwu maka 'mmekọrịta' mmekọrịta anyị na Emirate Afghanistan? Anyị nwere ike ịtụ anya njem njem nlegharị anya ugwu na Hindu Kush ọzọ n'afọ 2040 - yana ndị Taliban Islamist dịka ndị ndu nlegharị anya enyi?
Crazy zuru oke, mmadụ nwere ike iche, na-ama jijiji isi - ruo afọ iri abụọ mgbe agha Vietnam gasịrị, Samuel P. Huntington bipụtara mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya 'The Clash of Civilizations.' Ozizi Huntington na agaghị ebu agha n'ọdịnihu n'etiti mba ma omenala, na-eduga na mkparịta ụka arụmụka - na ịmaliteghachi 'Dialogue among Civilizations,' bụ counter-thesis nke onye ọkà ihe ọmụma Austrian Hans Köchler gbachitere na 1972, n'akwụkwọ ozi degaara UNESCO na hapụrụ na nchefu.
Ọ bụ na ọnọdụ dị ugbu a agaghị akwado nnyonye anya nke njem na njem nlegharị anya, ya na ndị otu ya kachasị elu UNWTO na WTTC, iji nyere aka megharia mkparịta ụka n'etiti 'mmepe anya' site na mgbasa ozi analog na dijitalụ, n'ụzọ na-ahụ anya na ike, n'aha echiche ịme " Udo site na njem nlegharị anya - ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị?
Ozi a na-achọ ka nsonye ndị mmekọ nwere otu echiche n'ime na n'èzí Njem & Njem Nlegharị anya, iji gbakọta na echiche na omume. Ọ nwere ike bụrụ mmụọ sitere n'echiche Louis D'Amore jiri ezi uche na ịnụ ọkụ n'obi gbasaa ma gbachitere ya dịka onye nchoputa na ogologo oge Onye isi ala nke 'International Institute for Peace site na njem.
Ọfọn, ka nrọ bụrụ ihe ùgwù nke ndị nwere nchekwube na ihe mgbagwoju anya na ngwá agha nke ndị na-enweghị ike - ndị dị ike ga-enwe nsogbu nke ha: Ọ bụ ezie na Russian Bear agbakeela site na ahụmahụ 'Afghanistan' nke onwe ya ma gbanwee onwe ya ọzọ, Ugo US na transatlantic ya. hummingbirds ka na-arụsi ọrụ ike na ịracha ọnya ha site na ozi ha dara ada. Dragọn ndị China enweghị ike itinye ọnụ n'ọchịchọ ọjọọ maka ihere nke ndị na-asọmpi ya zuru ụwa ọnụ. O yiri ka ụwa ọ̀ na-esi n’Agha Nzuzo gbuchapụ ozugbo banye n’udo. Nke ahụ pụtara ntakịrị karịa naanị armistice, ma ezuru itinye n'ihe ize ndụ mgbanwe ihu igwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị 'ekpo ọkụ', ikekwe ọ bụghị n'akụkụ 'mmejọ' omenala Huntington, ma ọ bụ n'oge ochie, nke a maara nke ọma na West-East. O siri ike ịgbagha echiche ahụ na kpuru ìsì ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike ịkpalite "ụkpụrụ, na-esite na nloghachi nke ihe omume - mana ọ bụ naanị n'ọtụtụ akụkụ," dị ka onye ọkà ihe ọmụma Leibniz kwuru. Lee enweghị ego nke imepụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị ebe ọ bụ na ákwà mgbochi Iron kwụsịrị!
E nwere akwụkwọ akụkọ ọzọ na-akpa ọchị banyere ụkpụrụ ndị a: “Mgbe mmadụ banyere n'ụwa dị ka onye ohi, ụwa ga-amanye ya ịnọgide na-ebi ndụ dị ka onye ohi. Nke a bụ nzaghachi ụwa, anyị nwere ike ịsị, mmegwara ya,” ka Ludwig Fusshoeller kwuru na 'Die Dämonen kehren wieder' ('Nlaghachi nke Daemons'). A ga-emeso ndị ọbịa ndị a na-ewere dị ka ndị omempụ, dị ka ndị dị otú ahụ, ma ọ bụ ndị njem nlegharị anya dị mfe, ndị ọchụnta ego na-eje ozi - ma ọ bụ ndị agha mba ọzọ! – Gịnị ka anyị nwere ike ikwu? 'Bye-bye ịnabata omenala' agaghị ezu.
N'ime ihe nkiri Goethe a ma ama, ezi ebumnuche Faust na-ekpebi site na mmeri nke onwe ya na okike. Otú ọ dị, dị nnọọ ka ọ na-enwe nnọọ obi ụtọ ịrụzu ọrụ ya nke na-ebu ibu, ọ tụfuru nzọ ya na Mephisto wee rịọ, sị: “Mgbe ahụ, n'oge ahụ, m ga-anwa anwa ịsị: 'Nọrọnụ nwa oge! Ị mara mma nke ukwuu!'”
Ọ bụrụ na anyị leba anya na mbara ala anyị taa, anyị ga-amata na 'ụwa Faustian' lọghachitere nke ọma, ebe ịma mma ewerela ejiji ọzọ mara mma nke afọ gara aga na ndị ọbịa na ndị ọbịa 'ọchịchọ na-adịghị agwụ agwụ, nke ọbụbụ ọnụ nke ọrịa na-efe efe na-akwado. "ịnọọ nwa oge..."
Onye edemede, Max Haberstroh, bụ onye otu ntọala Network Tourism Network (WTN).